ब्लग को लागि मोवाइल साइट बनाउने हो ? [Friday Tech]
Aakar July 23, 2010
ब्लग छ, कम्प्युटर बाट धेरै ले हेर्छन् । हिजो आज फेसबुक धेरै ले मोबाइल बाट पनि चलाउने हुँदा, तपाई को ब्लगहरु मोबाइल बाट पनि हेर्न खोज्छन्, मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु !
तर तपाई को ब्लग कम्प्युटर को लागि डिजाइन गरिएको हुँदा, मोबाइल मा तपाई को ब्लग लोड हुन धेरै समय लाग्छ, जसका कारण पैसा र समय दुवै को बर्बादी मात्र हुन्छ । साथै, कम्पयुटर को लागि डिजाइन गरिएको ब्लग, मोबाइल मा हेर्दा धेरै कुरा मिल्दैन ।
अर्को कुरा मोबाइल बाट हेर्ने पाठकहरु ‘साइडबार’ का विगेटहरु हेरेर बस्दैनन् । उनीहरुलाई नयाँ ब्लग के रहेछ भन्ने कुरा मात्र जान्ने इच्छाहरु हुन्छ । उनीहरु चाहन्छन्, ब्लगहरु क्रमैसँग मोबाइल को ब्राउजर मा देखियोस, चाँडो खुलोस, ब्लग सजिलो सँग पढ्न पाइयोस् ।
सायद तपाईहरु पनि यही सोच्नुहुन्छ होला, कुनै साइट मोबाइल मा खोल्नु पर्यो भने, तपाईहरुलाई चाँडो खुलोस, सजिलो सँग पढ्न पाइयोस् ।
अझ तपाईहरुलाई पनि आफ्नो ब्लग मोबाइल फ्रेन्डली बनाउने मन होला ! पक्कै पनि अहिले सबैकुरा मोबाइल मा अटाउन थालेको छ । मोबाइल बाट पनि तपाई को ब्लगहरु हेरिन्छन् भन्ने कुरा मा कुनै दुइमत छैन ।
तपाईलाई आफ्नो ब्लग को लागि मोबाइल साइट बनाउन मन लागेको छ तर कुरा के परिदियो भने, तपाईलाई यस्तो साइट बनाउने कुराहरु केही थाहा छैन । अब साइट नै बनाउन लगाउने हो भने पनि, खर्च धेरै लाग्छ, झन्झट धेरै छ ।
तर चिन्ता नगर्नुस् आज यहाँ मोबाइल साइट बनाउने एकदम सजिलो उपाय बताउँदैछौँ । तपाईले ५ मिनेट भित्रै आफ्नो ब्लग को लागि मोबाइल साइट बनाउन सक्नुहुन्छ ।
ती मोबाइल साइटहरु राम्रा मात्र देखिने हैनन्, मोबाइल मा लोड पनि चाँडो हुन्छ र पढ्न पनि सजिलो हुन्छ । तपाईका सबै ब्लगहरु सजिलै मोबाइल मा पढ्न सकिन्छ ।
1. Google Reader –
गुगल रिडर को सहायता ले तपाईले विना कुनै झन्झट आफ्नो मोबाइल साइट बनाउन सक्नुहुन्छ । गुगल रिडर को rss को मद्दत बाट १० सेकेन्ड मै तपाई को मोबाइल ब्लग तयार हुन्छ । गुगल रिडर बाट मोबाइल ब्लग बनाउन को लागि तपाई को ब्लग rss फिड लाई गुगल रिडर को तल को लिंक मा लगेर राखीदिनुस् ।
http://www.google.com/reader/m/view/feed/ [RSS फिड एड्रेस]
जस्तो आकारपोष्ट को मोबाइल भर्सन को लागि :
तपाईले यो लिंकलाई आफ्नो ब्लग मा राखेर, सबैलाई यो लिंक को मोबाइल साइट मा जान भन्न सक्नुहुन्छ । तर यो लिंक त धेरै लामो छ, सम्झन गाह्रो छ ! अत: तपाई को आफ्नै डोमेन छ भने, m.yourdomain.com आदि नाम राख्न सक्नुहुन्छ । जस्तो हाम्रो मोबाइल साईट http://m.aakarpost.com रहेको छ ।
तर आफ्नै डोमेन छैन भने पनि नआत्तिनुस्, तपाई ले विभिन्न लिंक सर्टनरहरु को प्रयोगबाट आफ्नो साइट को सम्झनसक्ने लिंक बनाउन सक्नुहुन्छ । जस्तो की हाम्रो यही मोबाइल साइटलाई यहाँ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । http://tinyurl.com/aakarpost तपाई पनि आफ्नो साइट को लिंक http://tinyurl.com मा गएर सम्झनसक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ ।
Mofuse.com को मद्दत ले पनि, तपाई ले आफ्नो ब्लग को मोबाइल साइट निशुल्क केही मिनेट भित्रै बनाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईले mofuse.com मा फ्रि मा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि आफ्नो साइट वा फिड लिंक दिएर केही छिन मै आफ्नो मोबाइल साइट बनाउन सक्नुहुन्छ ।
mofuse.com ले साइट बनाउने हुँदा तपाई को साइट को एक्सटेन्सन .mobi हुन्छ जस्तो कि हाम्रो साइट यहाँ हेर्न सकिन्छ http://aakarpost.mofuse.mobi/ ।
तर तपाई को आफ्नै डोमेन छ भने m.domain.com आदि को आफ्नै साइट लिंक बनाउन सक्नुहुन्छ । जस्तो की हाम्रो मोबाइल साइट: m.aakarpost.com ।
अथवा आफ्नो साइट छैन भने पनि,माथि भनिएजस्तै अरु लिंक सर्टनरहरु को सहायता ले लिंक सम्झन सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा mofuse.mobi कै एक्सटेन्सन सहित को लिंक आफ्नो ब्लग मा राख्न सक्नुहु्न्छ ।
यसरी तपाई को मोबाइल साइट केही छिन मै तयार हुन्छ । बाँकि मोबाइल साइट को लिंक प्रमोशन को जिम्मा चाँहि तपाइहरु को । सबैले थाहा पाउनु पर्यो नि लिंक हैन र ???
For free, mobile version of your blog, check this link:
हाम्रो मोबाइल साइट हेर्नुहोस्:
Dilip Acharya July 23, 2010 at 11:59 AM
राम्रो जानकारी। वर्डप्रेसको लागि त सायद प्लगइन नै पाईन्छ क्यारे, तर हामी ब्लगरमा ब्लग चलाउनेलाई भने गुगल रिडर नै सबैभन्दा सजिलो र नि:शुल्क उपाए होला । आफ्नै डोमेन नभएपनि यो गुगल रिडरको लिन्क भने बनाएर राख्नै परो अब :)
साँच्चै यो Mofuse.com १४ दिनको लागि मात्रै नि:शुल्क हो कि के हो?, साइटमा त त्यस्तै लेखिएको छ नि...।
धेरै पहिला मैले अर्को एउटा http://mobify.me/ भन्ने साईटबाट फ्रिमा ब्लगको मोबाईल साइट बनाएको थिएँ ...पासवर्ड बिर्सेर म्यानेज गर्न पनि मिलेको छैन, अब खोजतलास गर्नु पर्ला :)
Aakar July 23, 2010 at 12:51 PM
Mofuse.com ब्लग को लागि निशुल्क नै छ । प्रिमियम एकाउन्ट को लागि चाँहि १४ दिन को ट्रायल होला ।
मैले यसमै बनाएको २-३ महिना हुनलागि सक्यो, चलिराखेको छ, कहिँले काँहि चाँहि सर्भर सँग कनेक्ट हुँदैन ।
Aakar July 23, 2010 at 1:01 PM
For free, mobile version of your blog, check this link:P
राजेश नतांश July 24, 2010 at 3:54 PM
अमूल्य जानकारी बाँड्नुभएकोमा आकार जी धन्यवाद तर आकार जी म पनि मोबाइलमा कहिलेकाँही ब्लगहरु खोल्ने गरेको छु । मैले तपाईको ब्लग पनि आफ्नो मोबाइलको ओपेरा मिनीमा खोलेर हेरेँ तर त्यसलाई पढ्न सकिन सायद मोबाइलले नेपाली यूनिकोड सर्पोट गर्न सकेन होला । साथै कहिलेकाँही फेसबुक पनि आफ्नो मोबाइलबाट खोल्ने गर्छु तर नेपालीमा लेखिएका अक्षरहरु पढ्न सक्दिन केही उपाय छ कि यसको लागि ।
S July 24, 2010 at 6:50 PM
Very much informative piece.
Ashesh July 27, 2010 at 10:40 PM
thx for the info bro.
SL Nepal November 9, 2010 at 8:58 AM
Download the Text file from here and open it with Note Pad there are instrcuction to do.you don't have to pay anybody or create any account.
SL Nepal November 12, 2010 at 4:03 AM
राजेश नतांश November 12, 2010 at 4:03 AM
Dilip Acharya November 12, 2010 at 4:03 AM